Prezidaant Doonaald Traamp Direktera biroo qorannaa federaalaa duraanii James Comey aangoo irraa kan hojii irraa ari’aniif dhimma qorannaa Raashiyaaf miti jechuun isaanii ibsa duraan kenname sababaan aangoo irraa kaafamuu isaanii qorannaa sanaan wal qabatee ti ka jedhu waliin kan wal rukutu.
Traamp ergaa Twiteer erganiin waan hagas nama dhibu ta’ee utuu hin taane James Comey kan ani hojii irraa ari’eef sababaa Raashiyaaf miti jedhan.
Sabaa himaan waa’ee ari’muu Comey kijiba gabaasan jechuun qeeqan.
Traamp waggaa darbe gaaffii fi deebii TV NBC irraa Lester Holt waliin geggeessaniin ennaa isaan Comey hojii irraa ari’uuf murteessan kan jalqaba sammu isaaniitti dhufe qorannaan Raashiyaa jedhanii turan.
Traamp amma iyyuu kan abbaa alangaa addaa Robert Muelleriin geggessamu dhimma qorannaa Raashiyaan raafamaa jiru. Duula filannoo isaaniif Raashiyaa gidduu hidhati hin jiru jechuun haalaa jiraachuun isaanii ni beekama.
Miseensonni NATO Doonilee fi Jeettiiwwan Waraanaa Awrooppaa Bahatti Ergaa Jiran